Weerar ka dhacay caasimadda Afqanistaan - BBC Somali - Warar
Weerar ka dhacay caasimadda Afqanistaan
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Mey, 2013, 14:30 GMT 17:30 SGA
Weerar ka dhacay magaalada Kabul
Ciidammada ammaanka ee caasimadda Afqanistaan ee Kabul, ayaa hareereeyay dhisme ku yaall bartamaha magaalada oo ay qabsadeen koox rag hubaysan ah.
Dhowr qarax ayaa halkaas ka dhacay bilawgii weerarka, waxaana xigtay rasaas muddo socotay. Weriye BBC oo goobtaas agteeda joogay waxaa uu sheegay in gurigu uu yahay mid ay deggan yihiin marti shaqaale jnabiga ah.
Afhayeen u hadlay Daalibaan waxaa uu BBC u sheegay in dagaalyahannadoodu ay weerarkaas fuliyeen. deegaankaas waxaa ku badan dhismeyaal ay deggan yihiin shaqaalaha hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo xarumo dowladda Afqanistaan.
toddobaadkii hore baabuur qof isqarxiyay uu ku dhuftay kolonyo milateri oo maraysay magaalada Kabul, waxaa ku dhintay 15 qof. hase ahaatee khasaaraha weerarkan dambe weli si rasmi ah looma sheegin.